Ngubani oyiNkosi uBrahma, uThixo weNdalo eHindu
UbuHindu bubona yonke indalo kunye nomsebenzi wayo wezendalo yonke njengomsebenzi wezinto ezintathu ezisisiseko ezibonakaliswe oothixo abathathu, okuyi-Hindu Trinity okanye 'Trimurti': UBrahma - umdali, uVishnu - umgcini-mali, kunye noShiva - umtshabalali.
UBrahma ngumdali wendalo yonke kunye nazo zonke izidalwa, njengoko kuboniswe kwi-cosmology yamaHindu. I- Vedas , indala kunye neengcwele kwiimibhalo zesiHindu, zibhekisela kwiBrahma, kwaye ngoko ke uBrahma uthathwa njengoyise we- dharma .
Akufanele adideke kunye neBrahman eli gama eliqhelekileyo loPhezukonke okanye uThixo uSomandla. Nangona uBrahma ungomnye kaBathathu Emnye, ukuthandwa kwakhe akufani noko kuVishnu noShiva. I-Brahma iya kufumaneka ibekho ngaphezu kweemibhalo kunamakhaya nakwiitempile. Enyanisweni, kunzima ukufumana itempile ezinikele kwiBrahma. Enye itempile enjalo itholakala ePushkar eRajasthan.
Ngokutsho kwePasana , uBrahma nguNyana kaThixo, kwaye ngokubhekiswayo kuthiwa yiPrajapati. I- Shatapatha Brahman ithi uBrahma wazalwa ngu-Supreme Being Brahman kunye nomfazi wesifazane owaziwa ngokuba nguMaya. Efuna ukudala indalo, uBrahman kuqala wadala amanzi, apho wabeka imbewu yakhe. Le mbewu iguqulwe ibe yiqanda legolide, apho iBrahma yabonakala khona. Ngenxa yoko, iBrahma yaziwa nangokuthi 'Hiranyagarbha'. Ngokutsho komnye umxholo, uBrahma uzalwa yedwa kwintyatyambo ye-lotus eyakhula ukusuka kwintonga yeVishnu.
Ukuze amncede enze iphela, uBrahma wazala ookhokho abangama-11 bohlanga oluthiwa 'Prajapatis' kunye neentsikelelo ezisixhenxe okanye iSaptarishi. Aba bantwana okanye oonyana bakaBrahma, abazalelwe ngaphandle kwengqondo, babizwa ngokuba yiManasputras.
I-Symbolism yeBrahma kwiHindu
Kwilizwe lamaHindu, iBrahma ibonakala imele ibe neentloko ezine, iingalo ezine kunye nolusu obomvu.
Ngokungafani nabanye oothixo bamaHindu, uBrahma ayithwali isikhali ezandleni zakhe. Uphethe ibhodwe yamanzi, i-spoon, incwadi yemithandazo okanye iVedas, i-rosari kunye namaxesha amaninzi. Uhleli kwi- lotus kwi-lotus pose kwaye uhambahamba nge-swan ehlophe, enegunya lomlingo lokuhlukanisa ubisi kumxube wamanzi nobisi. I-Brahma ivame ukubonakaliswa njengelinen intshebe emhlophe, emhlophe, kunye neentloko zayo zifunda iiVedas ezine.
I-Brahma, i-Cosmos, Ixesha, ne-Epoch
I-Brahma ilawula 'iBrahmaloka,' iphela iqulethe bonke ubuqaqawuli bomhlaba kunye nezinye ihlabathi. Kwi-cosmology yamaHindu, indalo ikhona enye imini ebizwa ngokuthi 'Brahmakalpa'. Le mini ilingana neminyaka emine yeebhiliyoni zomhlaba, ekupheleni kwayo yonke indawo iphela ichithwa. Le nkqubo ibizwa ngokuthi 'pralaya', ephindaphinda iminyaka eyi-100, ixesha elimele ubomi bukaBrahma. Emva kokuba "ukufa" kukaBrahma, kubalulekile ukuba enye i-100 yeminyaka yakhe idlule aze azalwe kwakhona kwaye indalo yonke iqala ngokutsha.
ULinga Purana , ocacisa ukubala okucacileyo kwimijikelezo eyahlukeneyo, ubonisa ukuba ubomi bukaBrahma buhlulwe kwiiwaka eziliwaka okanye uMaha Yugas.
Brahma kwi-American Literature
URalph Waldo Emerson (1803-1882) wabhala inkondlo ebizwa ngokuba yi "Brahma" eyapapashwa e- Atlantic ngo-1857, ebonisa imibono emininzi ngokufunda kuka-Emerson izibhalo zesiHindu kunye nefilosofi.
Wachaza uBrahma ngokuthi "ukunyaniseka okungaguqukanga" ngokungafani namaMaya, "ihlabathi elibonakalayo eliguqukayo." I-Brahma ayinasiphelo, iyimbonakalo, ayibonakaliyo, ayibonakaliyo, ayiguqukiyo, engenasimo, enye kunye ngonaphakade, wathi uArtrist Christy (1899 - 1946), umbhali waseMelika kunye nogxeki.
Ubume bukaThixo kwiHindu
IMars, uThixo wamaRoma waseMfazwe
Izithuthi zeeHindu zikaThixo: iiVahanas
UHerne, uThixo we-Wild Hunt
Nataraj Symbolism yeDancing Shiva
Izithuba zabaDluli bokuqala
Iingcebiso zoPhicotho lweZikolo ze-Theatre
Dinosaurs kwiMbali yeSizwe yeMbali yeNdalo eDkt
Indlela Yokuhlaziya I-Cheerleading Pom Poms Yakho